Mandray ny toerana maha solombavam-bahoakan’i Madagasikara azy i Volahaingo Marie Thérèse. Manamafy izany ny didy (Arrêt n°02-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana androany 10 febroary 2020. Mitsahatra hatreo koa ny maha solombavam-bahoaka an’i Ravenasy Jean Emanielson, mpisolotoerana an’i Volahaingo Marie Thérèse tao Tsimbazaza, nandritra ny fotoana naha mpikambana tao amin’ny governemanta an’ity farany ny 24 jolay 2019 ka hatramin’ny 25 janoary 2020. Solombavam-bahoaka voafidy tao Bealanana, Faritra Sofia, narotsaky ny antoko MMM (Malagasy Miara Miainga) i Volahaingo Marie Thérèse. (Jereo Sary nomena)
Ao Addis Abeba, renivohitr’i Etiopia hatry ny omaly tolakandro ny Filoha Andry Rajoelina handray anjara amin’ny Fihaonana an-tampony faha-33 ireo Mpitondra Fanjakana sy governemanta eo anivon’ny Vondrona Afrikanina. Nandray anjara tamin’ny fihaonana manokana, nokarakarain’ny Filohan’ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana (BAD), Atoa. Akinwumi Adesina, ny filoha Rajoelina vao nigadona tany an-toerana, fihaonana niarahana tamin’ireo mpitondra fanjakana sy governemanta izay niompana indrindra tamin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Nanambara ny filohan’ny BAD fa isan’ny tompondaka amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara noho ireo hetsika ataon’ny fitondram-panjakana indrindra any amin’ny faritra atsimo.
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine, amin’ny hiverenan’i Volahaingo Marie Thérèse handray ny toerany ao Tsimbazaza. Voapetraka ny 7 febroary 2020 araka ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana. Solombavam-bahoaka voafidy tao Bealanana, avy amin’ny antoko Malagasy Miara-Miainga i Volahaingo Marie Thérèse, no voatendry ho Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa tao amin’ny governemanta Ntsay Christian. Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa no minisitra vaovao notendrena, ny 29 janoary 2020, nasolo toerana an’i Volahaingo Marie Thérèse.
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC), ny 6 febroary 2020, ny filohan’ny Antenimieram-pirenana Razanamahasoa Christine ny amin’ny hanondroana ireo izay hisolo an’i Rasolomampionona Hasimpirenena sy Raveloson Ludovic dit Leva. Solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Fandriana, Faritra Amoron’i Mania i Rasolomampionona Hasimpirenena ; Solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao Mahabo, Faritra Menabe tamin’ny fifidianana natao ny 27 mey 2019. Samy tsy mbola nandingana ny tokonan’ny Antenimieram-pirenana, samy tsy niatrika fivoriana na in-dray mandeha aza nandritra iny taona 2019 iny, satria samy voatazona am-ponja fotoana fohy taorian’ny naneken’ny CENI ny firotsa-kofidian’izy ireo. Samy voafidy ara-demokratika na Rasolomampionona Hasimpirenena na Raveloson Ludovic dit Leva, nefa samy tsy nisy niatrika fampielezan-kevitra.
Feno 11 taona anio, ny « raharaha 7 febroary » izay nisian’ny ra latsaka sy faty olona maro teo Ambohitsorohitra nandritra ny hetsi-bahoaka niafara tamin’ny fionganan’ny filoha Marc Ravalomanana teo amin’ny fitondrana. Niala an-tanindrazana ary nialokaloka politika tatsy Afrika Atsimo ity farany. Hanamarika ny lanonam-pahatsiarovana anio, ny fametrahana voninkazo eo amin’ny tsangambato fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin’ny 7 febroary 2009, manoloana ny lapam-panjakana eo Ambohitsorohitra. Mifamahofaho ny resaka manodidina iny « raharaha 7 febroary » iny. Na ireo lohandohan’ny mpisorona tamin’ny hetsi-bahoaka teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey tamin’ny 2009 aza nipatitaka sy mifampifahavalo mandraka ankehitriny. Maro ireo sivily sy miaramila niditra am-ponja noho iny raharaha iny, na mpiara-dia tamin’i Andry Rajoelina izay nitarika ny hetsika teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey izany, na ireo mpiara-dia tamin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ity farany mitaky ny hanaovana fahadihadiana mahaleotena, hivoahan’ny tena fahamarinana manodidina iny raharaha iny.
Nanao hetsi-panoherana ny voka-pifidianana Ben’ny tanàna natao tamin’ny 27 novambra 2019 ny vahoaka ao amin’ny Kaominina Andrebakely Avaratra, Distrika Amparafaravola. Kandidan’ny Tiako i Madagasikara no nitarika tamin’ny isam-bato tamin’ny vokatra feno vonjimaika navoakan’ny CENI. Ny kandidan’ny IRK, izay laharana fahatelo tamin’ny isam-bato vonjimaika, no nambaran’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana fa voafidy Ben’ny tanàna. Manohitra io voka-pifidianana io ny ao Andrebakely Avaratra, mitaky ny fahamarinana sy ny hanajana ny tena safidim-bahoaka.
Any Inde ny Jeneraly Rakotonirina Richard, Minisitry ny Fiarovam-pirenena. Nisy, androany 06 febroary 2020, ny fihaonany tamin'ny Minisitra Indianina Rajnath Singh nandritra ny "Defexpo20 India", ampirantiana ireo fitaovana ara-tafika vokarin-dry zareo indianina. Nibahan-toerana tamin'ny fihaonana ny sehatry ny fiarovana ary ny fahandriampahalemana an-dranomasina. Teo koa ny hanatsarana hatrany ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny firenena roa tonta. (Jereo Sary Tohiny)
Nanao fanehoan-kevitra ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao tao aorian'ny namoahan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny didy fanapahana laharana faha 04-HCC/D3 ny 05 febroary 2020 momba ny maha tsy manankery ireo didy hitsivolana noraisin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny filankevitry ny minisitra. Raha tena mamaky tsara ilay fanapahana navoakan’ny HCC, hoy i Rivo Rakotovao dia betsaka ny fanontaniana mipetraka. « Rehefa inona no tsy maintsy tanterahina tsy misy fepetra ny didy avoakan’ny HCC », satria tsy nanavaka na inona ny didy navoakany tamin’ny 13 febroary 2019 fa tsy maintsy alefa manontolo hankatoavina eny anivon’ny Parlemanta ; raha ny didy navoakan’ny HCC omaly indray anefa, hoy ny fanamarihany, dia zarazaraina ireo didy hitsivolana noraisin’ny filoham-pirenena tokony alefa hankatoavina eny anivon’ny Parlemanta.
Nambaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) , araka ny fanapahana faha 04-HCC/D3 androany 05 febroary 2020, fa azo raisina ny taratasy napetraky ny filohan’ny Antenimierandoholona tamin’ny 14 janoary 2020, mangataka amin’ny HCC ny hanafoanana tsy hanankery ireo didy hitsivolana rehetra noraisin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny filankevitry ny minisitra. Raha ny didy navoakan’ny HCC tamin’ny febroary 2019 dia tamin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan’ny Parlemanta no tsy maintsy nandefasana ireo didy hitsivolana rehetra noraisin’ny filoham-pirenena, dia namindra fo ny HCC ka nanome fe-potoana ny governemanta mba handamina ny fandefasana ireo volavolan-dalana rehetra mba hankatoavina mandritra ny fotoam-pivoriana manaraky ny Parlemanta, raha tsy izany dia foana tsy manankery avokoa ireo didy hitsivolana noraisin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny taona 2019, ankoatra ny didy hitsivolana faha 2019-005 nanitsiana lalàna mifehy ny tetibola 2019 sy ireo didy hitsivolana mirakitra findramam-bola avy any ivelany.
mercredi, 05 février 2020 15:01
Kolonely Richard Ratsimandrava: 45 taona lasa izay no natolotry ny Jeneraly Ramanantsoa azy ny fahefana feno
5 febroary 2020 - 5 febroary 1975, 45 taona katrona androany no natolotry ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa an’ny Kolonely Richard Ratsimandrava ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana ka nanekeny fa « Tsy hiamboho adidy aho mon général ». (Jereo Sary Tohiny)